မြန်မာနိုင်ငံဟာ တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ အကျပ်အတည်းတွေကို ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ယာယီညှိနှိုင်းရေးမှူးပြော - YOYARLAY Digital Media and News
မြန်မာနိုင်ငံဟာ တစ်ခုထက်မကတဲ့ အကျပ်အတည်းတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး ပိုမိုဆိုးရွားပြင်ထန်လာတဲ့ အခြေအနေတွေကို ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ယာယီညှိနှိုင်းရေးမှူးက ပြောပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေက လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းက ရရှိထားတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းဆိုင်ရာ တိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကို ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့ (၇၆) နှစ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂနှစ်ပတ်လည့်နေ့ သဝဏ်လွှာမှာ ယာယီညှိနှိုင်းရေးမှူးက ထည့်သွင်းရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
“အခုလိုအကျပ်အတည်းတွေ ကြုံတွေနေရတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်အနေနဲ့ အားလုံးကို နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံ ကတိပြုလိုတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ကုလသမဂ္ဂဌာနအဖွဲ့တွေ အနေနဲ့ မြေပြင်မှာ ဆက်လက်ရှိနေပြီး မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးဆက်လက် သယ်ပိုးသွားမယ်ဆိုတာပါပဲ” လို့ သူက ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုး အပါအဝင် ဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို စုပေါင်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အတွက် မူဘောင်တစ်ရပ်အဖြစ် အရင်ကလိုပဲ တရားဝင်ခိုလုံမှုရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ယာယီညှိနှိုင်းရေးမှူးက ပြောပါတယ်။
ဆာလောင်ငတ်မွတ်မှုတွေ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ တန်းတူညီမျှမရှိမှုတွေဟာ ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားမှာရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂနှစ်ပတ်လည့်နေ့ သဝဏ်လွှာထဲမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
Previous Previous post: အခကြေးငွေမယူဘဲ ကမ္ဘာလှည့်ကုသပေးနေတဲ့ သွားဆရာဝန်ကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေ ပြောင်းလဲသွားပုံများ
Next Next post: ကုလသမဂ္ဂက နှစ်လအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူ (၆၀၀၀) ကျော်ကို စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့
MEMORY! ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှ မျိုးဆက်သစ် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သူများအတွက် ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းများနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိစေရန် ပြင်ဆင်၍ ကူညီပံ့ပိုးပေးမည်
ယခုနှစ်တွင် MEMORY! ပွဲတော်အနေဖြင့် ကျန်းမာရေး အကျပ်အတည်းများကြောင့် MEMORY နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကဏ္ဍ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်သော လူအများ စုဝေး၍ ရုပ်ရှင်များ ပြသခြင်းကို ကျင်းပပြုလုပ် နိုင်တော့မည် မဟုတ်ဘဲ အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ၂ဝ၂၁…
Published: November 17, 20202:32 pm Updated: 2:33 pm